စျေးအသက်သာဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းနှစ်ဆအလှည့်အလှည့်အလှည့်စက်များအတွက်ကစော်ဖောက်ခြင်းနှင့်စက်ရုံများအတွက် | YiZheng
The နှစ်ဆဝက်အူဆွေး Turner တိရိစ္ဆာန်အညစ်အကြေး၊ ရွှံ့နွံအမှိုက်သရိုက်များ၊ ရွှံ့များစစ်ထုတ်ခြင်း၊ အမှိုက်များ၊ ဆေးဝါးအကြွင်းအကျန်များ၊ ကောက်ရိုးများ၊ sawdust နှင့်အခြားအော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက်အချဉ်ဖောက်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။
နှစ်ဆဝက်အူဆွေး Turner စက်ကဘာလဲ?
မျိုးဆက်သစ် နှစ်ဆဝက်အူဆွေး Turner စက် နှစ်ဆဝင်ရိုးပြောင်းပြန်လှည့်လှုပ်ရှားမှုတိုးတက်လာသဖြင့်၎င်းသည်လှည့်ခြင်း၊ ရောနှောခြင်းနှင့်အောက်စီဂျင်ရရှိခြင်း၊ အချဉ်ပေါက်နှုန်းတိုးတက်ခြင်း၊ အလျင်အမြန်ပြိုကွဲခြင်း၊ အနံ့ထွက်ပေါ်လာခြင်းကိုတားဆီးခြင်း၊ အောက်စီဂျင်ဖြည့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုချွေတာခြင်းနှင့်အချဉ်ဖောက်ခြင်းအချိန်တိုသည်။ ဤစက်ပစ္စည်း၏အတိမ်အနက်သည် ၁.၇ မီတာအထိရောက်ရှိနိုင်ပြီးထိရောက်သောလှည့်ပတ်အကျယ်သည် ၆-၁၁ မီတာအထိရောက်ရှိနိုင်သည်။
နှစ်ဆဝက်အူဆွေး Turner စက်၏လျှောက်လွှာ
(၁) နှစ်ဆဝက်အူဆွေး Turner စက် အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံများ၊ ဒြပ်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာအပင်များကဲ့သို့အချဉ်ပေါက်ခြင်းနှင့်ရေဖယ်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
(၂) အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများနည်းသောအနည်အနှစ်များနှင့်စည်ပင်သာယာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက်အထူးသင့်လျော်သည် (အော်ဂဲနစ်ပါဝင်မှုနည်းသောကြောင့်အချဉ်ပေါက်ခြင်းအပူချိန်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အချဉ်ဖောက်ခြင်းအချိန်ကိုလျှော့ချရန်) လိုအပ်သည်။
(၃) အေရိုးဗစ်အချဉ်ပေါက်ခြင်း၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ contact မှပါ ၀ င်ရန်လေထဲတွင်ပစ္စည်းများနှင့်အောက်စီဂျင်များအလုံအလောက်ထိတွေ့ပါ။
၁။ ကာဗွန် - နိုက်ထရိုဂျင်အချိုး (C / N) ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများကအော်ဂဲနစ်ပြိုကွဲခြင်းအတွက်သင့်လျော်သော C / N သည် ၂၅း၁ ဖြစ်သည်။
၂ ။ အမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်မှု၌ဆွေး၏ပါဝင်မှုကိုယေဘုယျအားဖြင့် ၅၀% မှ ၆၅% အထိထိန်းချုပ်သည်။
3. ဆွေးလေဝင်လေထွက်ထိန်းချုပ်မှု။ ဆွေး၏အောင်မြင်မှုအတွက်အောက်စီဂျင်ထောက်ပံ့မှုသည်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ပုံတွင်ရှိသောအောက်စီဂျင်သည် ၈% မှ ၁၈% အထိသင့်လျော်သည်။
4. အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု။ အပူချိန်ဆွေး၏သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများ၏လှုပ်ရှားမှုထိခိုက်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အပူချိန်မြင့်ကစော်ဖောက်ခြင်းသည်များသောအားဖြင့် ၅၀ မှ ၆၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြားတွင်ရှိသည်။
5. PH ထိန်းချုပ်မှု။ PH သည်သေးငယ်သောဇီ ၀ သက်ရှိများ၏ကြီးထွားမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောအရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံး PH သည် ၆-၉ ဖြစ်သည်။
၆ ။ လက်ရှိအချိန်တွင်ပိုမိုသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများကို deodorize လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။
Double Screw Composter Turner Machine ၏ကောင်းကျိုးများ
(၁) စက်တစ်လုံး၏လည်ပတ်မှုအားသိရှိနိုင်သောအချဉ်ဖောက်သည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသည် groove မျိုးစုံရှိသည့်အဆက်မပြတ်ဖြစ်စေ၊
(2) မြင့်မားသောကစော်ဖောက်ခြင်းထိရောက်မှု, တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှု, ခိုင်ခံ့နှင့်တာရှည်ခံ, ယူနီဖောင်းလှည့်။
Double Screw Composting Turner Machine ဗီဒီယိုပြသမှု
ဟိုက်ဒရောလစ် pump မော်တာ
L × ၆ မီတာ
L ကို× 12m
× ၁၅ မီတာ L
ရှေ့သို့ ဘီးအမျိုးအစားဆွေး Turner စက်
နောက်တစ်ခု: ဒေါင်လိုက်အချဉ်ပေါက် Tank
နိဒါန်း Self-propelled Groove Composting Turner Machine ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ Self-propelled Groove Composting Turner Machine သည်အစောဆုံးကစော်ဖောက်ခြင်းကိရိယာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအော်ဂဲနစ်မြေသြဇာစက်ရုံ၊ ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ၊ ရွှံ့နွံနှင့်အမှိုက်သရိုက်စက်ရုံ၊ ဟော်ရီကာချာစိုက်ခင်းနှင့် bisporus စက်ရုံများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
နိဒါန်း Horizontal Fermentation Tank ဆိုတာဘာလဲ။ အပူချိန်မြင့်မားသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်အညစ်အကြေးပေါင်းစပ်ခြင်းတင့်ကားသည်အဓိကအားဖြင့်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ကြက်၊ မြေသြဇာ၊ မီးဖိုချောင်မှစွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊
နိဒါန်းဒေါင်လိုက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်အညစ်အကြေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းဘာလဲ။ ဒေါင်လိုက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်မြေသြဇာအချဉ်ဖောက်ခြင်းတိုင့်သောကစော်ဖောက်ခြင်းကာလ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိပြီးsmallရိယာသေးငယ်ပြီးဖော်ရွေသောပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသည်။ တံခါးပိတ်အေရိုးဗစ်ကစော်ဖောက်ခြင်း tank တွင်စနစ် ၉ ခုပါ ၀ င်သည်။ အစာကျွေးခြင်းစနစ်၊ silo ဓာတ်ပေါင်းဖို၊ ဟိုက်ဒရောလစ်မောင်းစနစ်၊ လေဝင်လေထွက်စနစ်များ ...
နိဒါန်းဘီးအမျိုးအစားဆွေး Turner စက်ကဘာလဲ? ဘီးအမျိုးအစားဆွေး Turner စက်သည်အကြီးစားအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံတွင်အရေးပါသောကစော်ဖောက်ခြင်းကိရိယာဖြစ်သည်။ လူတစ် ဦး တစ်ယောက်တည်းဖြင့်လည်ပတ်သောဘီးဆွေးတာနာသည်ရှေ့သို့နောက်သို့ရွေ့။ လွတ်လပ်စွာလည်ပတ်နိုင်သည်။ ဘီးဆွေးဘီးတိပ်အပေါ်မှာအလုပ်လုပ် ...